Duufaanta kuleylaha ah ee Ophelia ayaa gaari karta Galicia | Saadaasha Shabakadda
Waxaan u maleynay inaan heli doono usbuuc "caadi ah", oo leh heerkul ka sarreeya waxa caadiga ahaan lahaa xilligan oo aan lahayn saadaal roob, laakiin Ophelia, duufaan kuleylaha cusub ee xilli duufaantii Atlantic, ayaa ka tagi kara roobab muhiim ah waqooyiga-galbeed ee Spain.
Waa dhacdo yar oo xiiso leh, maadaama aysan raacin koorsada galbeed-bari ee duufaannadu sida caadiga ah raacaan, laakiin waxay u socotaa galbeedka, dhanka Azores.
1 Ophelia, waa dhacdo aad u gaar ah
2 Waa maxay dabeecadiisa suurtagalka ah?
Ophelia, waa dhacdo aad u gaar ah
Heerkulka xilligan ee Badweynta Atlantik ee Spain iyo Boortaqiiska.
Sawir - Meteociel.fr
Badweyn diiran, oo qiyaastii ah 22 darajo Celsius ama ka badan, ayaa lagama maarmaan u ah duufaan inay sameysmaan oo ay sii joogaan muddo dheer ama ka gaaban, laakiin Ophelia waxaa ku dhici doonta arrin aad u adag. In kasta oo qaybtan adduunka ah heerkulka dusha baddu ka sarreyso sidii la rabay, haddana ma aha mid diirimaadkiisu ku filan yahay oo ay u noqon karto duufaan xoog leh sida kuwa ku samaysma biyaha kulaylaha. Xitaa sidaas, haddii ay la falgasho xoogaa hawo qabow dherer ahaan waxay ilaalin kartaa xasillooni-darrada sii dheereyn doonta qulqulka.
Waa maxay dabeecadiisa suurtagalka ah?
Sawir - Accuweather.com
Weli ma cadda koorsada uu qaadi doono, laakiin waa la ogyahay inay galbeed u socoto. Halkee si sax ah? Lama oga. Waxaa laga yaabaa inay taabato waqooyiga-galbeed ee Galicia, ama waxay ku sii jeeddaa Boqortooyada Ingiriiska. Shaki badan baa ka jira. Ilaa hadda, waxa la ogyahay waa inay leedahay cadaadis dhan 996mb, iyo dabeylaha ugu badan ee dabeylo gaaraya 120km / saacadii.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, berrito, Khamiista, waxay gaari kartaa qeybta duufaanta, iyadoo dabeylo wata dabeylo ka badan 150km / saacaddii, laakiin haddii laga gudbo Galicia, wax dhici kara inta u dhexeysa Axadda iyo Isniinta, kuma imaan lahayn duufaan laakiin waxay u imaan doontaa duufaan ka baxsan dhulka isagoo ku samaysmay biyo aan kulaylaha lahayn.
Waan arki doonaa waxa dhaca aakhirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta kuleylaha ah ee Ophelia ayaa gaari karta Galicia